Samy Manao Diabe Ao Sofia na ny Mpanome Voninahitra Ny Jeneraly Pro-Nazi, na ny Mpitsipaka ny Fasisma · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2018 19:18 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, македонски, Français, Español, русский, Ελληνικά, English
Mpanao fihetsiketsehana manohitra ny fasista mivory ao Sofia mba hanohitra ny diaben'ny Neo-Nazi Lukov. Saripikan'i Ruslan Trad, CC BY.
Andro feno fandaharam-potoana ny 17 Febroary tao Sofia renivohitra Bolgara, izay nanao diabe ireo mpanohana ny farany havanana mba hanamarihana ny faha-75 taona namonoana ilay minisitry ny fiarovana Bolgara mpomba ny Nazi, Hristo Lukov, ary namaly vao maraina kosa ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra izany ka nanameloka ny nasionalisma sy ny fankahalana vahiny.
Nampiseho ny fihetsiketsehana fa miatrika olana maro mitovy amin'ny hita any amin'ny faritra hafa manerana an'i Eoropa, anisan'izany ny fisongadinan'ny politika neo-fasista, ny firenena izay mihazona ny Fiadidiana ny Vondrona Eoropeana amin'izao fotoana.
Nandritra ny 16 taona, nikarakara Diabe Lukov manerana ny araben'i Sofia afovoany ny Sendikà Nasionaly Boligara (BNS). Araka ny fanazavan’ilay mpanao gazety Kanadianina Michael Colborne hoe:
Ny diabe, izay hotontosaina amin'ny Asabotsy izao, dia ho fanomezam-boninahitra an'i Hristo Lukov, Jeneraly Boligara nitarika ny Sendikà prô-Nazi ao amin'ny Vondrona Nasionaly Boligara, fikambanana izay nanana ny famantarany swastika tamin'ny lasa. Nifandray akaiky tamin'ny fitondrana Nazi i Lukov, ka anisan'izany i Hermann Goering, ary iray amin'ireo mpisolovava mafàna fo tamin'ny “Lalànan'ny fiarovana ny Firenena” nalaina tamin'ny Nazi ao Bolgaria, izay, ankoatra ny hafa, nanery ireo Jiosy 50.000 tao amin'ny firenena mba hitondra kintana mavo.
Kanefa manizingizina izy ireo fa tsy misy anti-Semitika na Nazi ny zavatra ataony.
Isan-taona, mpanao diabe avy any Boligaria sy any ivelany no mitafy amin'ny fisaonana mainty, mitondra fanilo ary mihirahira fiderana an'i Lukov manerana ny araben'i Sofia. Mifarana any amin'ny trano namonoan'ireo prô-Komonista an'i Lukov tamin'ny Febroary 1943 ny diabe, ka mametraka fehezam-boninkazo ao ireo mpanao dabe.
Anisan'ireo ijoroan'ny BNS, izay tsy manana toerana ao amin'ny Antenimieram-pirenena ao amin'ny firenena, ary mampiroborobo ny fomba fijery tsy mandefitra amin'ny fifindra-monina (“Bolgaria ho an'ny Bolgara ary Afrika ho an'ny Afrikanina“), ary mitsipaka ny demaokrasia parlemantera maro antoko misy ao Bolgaria ankehitriny sady mitaky “fanangonam-pahefana matanjaka.”
Ny andro mialoha ny diabe lehibe, nanao fampisehoana mampatahotra ireo mpankafy an'i Lukov, mandeha manerana an'i Sofia Afovoany, mitabataba teny filamatra sy mitondra felana sy fanilo. Tsy niditra an-tsehatra ny polisy.
“Tsy mila Nazi eny An-dalambe”
Tamin'ny 17 Febroary, vondrona mpanohitra mpanao fihetsiketsehana teo amin'ny 300 teo no nivorivory manodidina ny mitataovovonana tao amin'ny zaridaina ao akaikin'ny moskean'i Sofia sy Sofia Central MineralBaths. Nankany amin'ny lalana manodidina ny distrikan'ny Central Halls, ny synagoga sy ny biraon'ny antoko politika nasionalista IMRO -Fanafihana sy Hetsika Nasionaly Bolgara, izay ao anatin'ny fitondrana izy ireo avy eo.
Mitondra sora-baventy tahaka ny hoe “Tsy Mila Nazi eny an-dalana”, niventsoventso fanohanana an'ireo mpitsoa-ponenana sy ny vitsy an'isa, ary manohitra ny nasionalisma sy ny kapitalisma ireo mpanao fihetsiketsehana.
Sary maromaro avy amin'ny diabe anti-fasista mitohy ao Sofia
Ankoatra ireo Bolgara, avy any Gresy, Italia sy Espaina ihany koa ireo mpandray anjara. Tsy navelan'ny polisy hiditra tao amin'ny lalambe afovoan-tanàna ireo mpanohitra mpanao fihetsiketsehana, milaza ny polisy fa noho ny antony ara-piarovana amin'izay mety ho fifandonana amin'ireo mpanatrika ny Diabe Lukov, izay efa mihaodihaody manerana ny tanàna izany.
Vondrona maromaro avy amin'ny diabe anti-Nazi ora fohy talohan'ny diabe Nazi antsoina hoe Diabe Lukov
Nisy fotoana, mpikambana ao amin'ny vondrona nasionalista Alemà no niezaka nihantsy ireo mpanohitra mpanao fihetsiketsehana. Nitranga imbetsaka ny toe-javatra tahaka izany. Nisambotra mpihantsy iray ny polisy.
Nanatrika ny diabe ihany koa ilay mpanao gazety Kanadiana, Michael Colborne ary namoaka lahatsary fohy:
lahatsary farany, mandeha ao amin'ny Synagogan'i Sofia
Ny diabe Lukov
Mikasika ny diabe Lukov, nanombantombana ny polisy fa olona 500 mahery no nanatrika, raha nilaza ireo mpikarakara tany am-boalohany fa olona eo amin'ny 1000 eo no andrasan'izy ireo handray anjara.
Nisy ny fijoroan'ny vondrona Neo-Nazi miharihary avy any Boligaria sy Eoropa manodidina. Na dia teo aza izany, nandà ny fiampangàna ny BNS fa anti-Semita na neo-Nazi ny diabe.
Araka ny filazan'ilay mpanao gazety Boligara Mariya Petkova, Alemà 50, Frantsay 10 sy Soedoà maro no nanatrika ny diabe Lukov:
Fianakaviana iray nialokaloka teny an-joron-dalana raha nandalo tao Sofia ny diabe Lukov farany havanana androany maraina. Manampina ny sofiny ilay zazavavy.
Olona teo amin'ny 10 avy amin'ny fikambanana farany havanana Frantsay “Tanora Nasionalista” no nanatevin-daharana ny diabe Lukov farany havanana Boligara
Ankoatra ireo Alemà 50 nanatrika ny diabe Lukov tao Sofia, misy ihany koa ireo olona avy any Frantsa, Soeda sy Hongria.
Nanameloka ny diabe Lukov ny antoko politika lehibe rehetra ao Bolgaria, anisan'izany ireo solontena avy amin'ny Tia Tanindrazana Tafaray farany havanana, na dia mandray anjara amin'ny diabe hatrany am-piandohana aza ny sasany amin'ireo mpikambany. Niezaka nandràra ny diabe ny ben'ny tanànan'i Sofia, Yordanka Fandakova, saingy nentin'ireo mpikarakara tany amin'ny fitsarana ny raharaha ary nandresy ry zareo.